Previous Article Adịnụba Adụọla Ndị Ntorobịa Na-Ede Akwụkwọ Ka Ha Gbado Anya
Next Article Ụlọ Ọrụ FERMA Amalitela Idozisị Ụfọdụ Ụzọ N'Anambra
Nke a bụ nke e mere site n'okpuru isi ụlọ ọrụ okwu metụtara ọdịmma ọhanaeze na steeti ahụ, iji kwalite adịmọcha, ezi mmiri ọñụñụ nakwa ihe ndị ọzọ e ji mmiri eme na ya bụ ụlọahụike na gburugburu ya.
N'okwu ya na mmemme inyefè ya bụ mmiri n'aka ndị obodo ahụ na ndị nlekọta ụlọ ụlọahụike ahụ, onye nọchitere anya ụlọ ọrụ ahụ, bụ Maazị Chinweike Ajanobi kwuru na ọ bụ ọchịchọ obi Gọvanọ Willie Obianọ ime ka ihe dịrị Ndị Anambra mma ma dịkwara ha mfe, iji hụ na a kwàlìtère ọnọdụ obibi ndụ ha n'ogoogo dị elu.
Ọ gara n'ihu kpọpụtasịa ụfọdụ ihe dị iche ọchịchị nọ ugbu a na steeti ahụ mepụtagoro n'ịkwàlite mmepe ime-ime obodo, na ime ka ihe dịrị ndị bi n'ime obodo mma, ma kwuo na nke ahụ enyela nnọọ aka n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche ime ka ya bụ steeti bụrụ eji ama àtụ. Ọ dụkwazịrị ndị obodo ahụ ka ha lekọta mmiri ahụ anya nke ọma, ma chekwaba ya na ihe ndị ọzọ gọọmenti rụnyèrè na mpaghara ahụ iji mee ka ọ dịtòóró ha aka.
Ka ọ na-ebunye Gọvanọ Obianọ ụkpa ekele maka ezi ọrụ ahụ, onyeisi ọchịchị obodo Enugwu-Ukwu, bụ Maazị Greg Egentị kọwara ya bụ ọrụ ngo dịka nke magburu onwe ya, n'ihi oke urù ọ bààrà ụlọ ahụike ahụ nakwa ndị obodo ahụ n'izugbe, ọ kachasị n'ime ka ezigbo mmiri ọñụñụ dị ha nso ma ruokwa ha aka
Oge ọ na-ekelekwa osote odeakwụkwọ mgbasa ozi nye Gọvanọ Obianọ, bụ Maazị Emeka Ozumba maka ezi agbambọ ya n'ịdọtara ha mmiri ahụ nakwa ịhụ na a rụchapụrụ ya n'oge a tụrụ anya; Maazị Egentị kwèzịrị nkwa na ha ga-aga n'ihu ichekwa na ilekọta ya nke ọma, ọbụnadị dịka o kwèrè nkwà na ha ga-aga n'ihu inye ọchịchị ya nkwàdo n'ọrụ ọma dị iche iche ọ na-arụgasị na ngalaba niile steeti ahụ.
Na nkenke okwu ya, Maazị Emeka Ozumba kọwara atụmatụ mmepe nke ọchịchị Gọvanọ Obianọ dịka nke magburu onwe ya na pụrụ iche, n'ihi na o jezùrù obodo niile nke steeti ahụ ọnụ, ọ kachasị ọrụ mmepe nke ahụ ọ na-abàgide site n'inye obodo ọbụla dị n'ime steeti ahụ ego dị nde Naịra iri abụọ, iji họrọ ma rụọ ihe na-akpà ha.
O tòkwàzịrị ụlọ ọrụ ahụ lekọtara ya bụ ọrụ ngo wee ruo na a rụchaa ya dịka a tụrụ anya, ma kwuzie na ndị Urunnebo ga-echekwaba ya bụ mmiri na ihe ndị ọzọ gọọmenti rụnyèrè na mpaghara ha, n'ihi na ilekọta na ichekwaba akụrụngwa gọọmenti dị n'obodo ha sò n'otu ihe pụrụ iche e jiri mara ya bụ obodo.